IPhone-ka laga sameeyay Hindiya, wuxuu bilaabmayaa in lagu iibiyo Yurub | Wararka IPhone
Sanadihii la soo dhaafay, ragga ka socda Cupertino waxay maalgashiyo muhiim ah ka sameynayeen Hindiya, si ay u qabsadaan qayb ka mid ah kalluunka muhiimka ah ee ay u taagan tahay qaybta taleefanka. Sidan oo kale, Apple ayaa bilaabay inuu ku samayso qalab kasta oo ka mid ah dalkan, aalado loogu talo galay waddankaas.
Si kastaba ha noqotee, iyo sida laga soo xigtay The Times Times, Apple wuxuu bilaabay inuu Yurub ku qaybiyo noocyada iPhone-ka ee kala duwan ee laga soo saaro Hindiya, tani waxay u oggolaaneysaa Apple inay faa'iidooyin badan u hesho terminal kasta, tan iyo qiimaha shaqaaluhu aad buu uga jaban yahay kan Shiinaha.
Xilligan la joogo, sida uu sheegayo wargeyskani, iPhone-ka la dhoofiyaa kama badna 100.000 oo unug bishii, tiro aad u yar haddii aan xisaabta ku darno in Apple ay iibiso malaayiin iphone bil kasta. Warkani wuxuu xaqiijinayaa, markale, in Apple isku dayayo Kala duwanaanshaha silsiladdaada wax soo saarka ee ka baxsan Shiinaha halka dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha uu sii socdo.
Waqtigan xaadirka ah, Apple waxay soo saartaa oo keliya iPhone 6s iyo iPhone 7 gudaha Hindiya, aalad loogu talagalay dadweynaha maxalliga ah, maadaama ay qiimo jaban tahay, waa moodooyinka ugu jaban ee ay Apple hadda ku bixin karto dalkaoo ay la socdaan iPhone SE. Si kastaba ha noqotee, qorshayaasha Apple ayaa ah inay bilaabaan soo saarista noocyada iPhone-ka ee hadda jira, iyo kuwa la soo bandhigi doono dhowr bilood.
Laakiin Apple ma aha shirkadda kaliya ee weyn ee qeyb ka mid ah wax soo saarkeeda u wareejisay Hindiya, Dal siinaya tas-hiilaad fara badan shirkadaha shisheeye si ay u maal gashadaan warshadaha oo ay u noqdaan Shiinaha cusub, ugu yaraan sanadaha soo socda, dhaqdhaqaaq dhaqso ama goor dambe ku dambayn doona oo saameeya Shiinaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » IPhone-yada laga sameeyay Hindiya waxay bilaabeen in lagu iibiyo Yurub
Codsiga otomaatiga guriga Eve wuxuu kuhelaa qaab mugdi ah cusbooneysiintiisa cusub